ICasa de los Quercus - I-Airbnb
ICasa de los Quercus
Igumbi elinye lokulala kwiintaba eziselunxwemeni kufutshane nolwandle kunye nelizwe lewayini.
Ifakwe kwilizwe ekuphakameni kwe-1400', iimayile ezi-5 ngasentshona ye-Atascadero kwi-Hwy. I-41, iikhilomitha ezili-10 ukuya eMorro Bay, imizuzu eyi-15 ukuya ePaso Robles kwilizwe lewayini, imizuzu engama-20 ukuya eSan Luis Obispo edlamkileyo, imizuzu engama-45 ukuya eCambria, kwinqaba yaseHearst kunye neNdlovu yeSeal Rookery. Ifakwe kwigumbi elinye lokulala elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Le ndawo yabucala inikwe kakuhle kwaye ibonelela emazantsi nasentshona (ukutshona kwelanga okukhulu) iimbono zomthi ogqunywe iFrog Pond Mtn. (2437'). Sineendlela ezininzi kwiihektare zethu ezili-11. Ukuhamba ngemizuzu eli-10 kukuthatha ukuya kwiCreek yethu kunye neminye imizuzu eyi-15 ukuya encotsheni (1733') yentaba yethu.
Izinyuko ukuya kwi-2nd floor casita. Ukusetyenziswa kwasimahla kwewasha kunye nesomisi.
Yindlu yabucala kodwa sikwisiza kwaye siyakonwabela ukunxibelelana neendwendwe zethu.
Sibekwe embindini weSan Luis Obispo County ke yimizuzu emi-5 ukuya kwengama-45 kuphela kuzo zonke iindawo ezinomtsalane ezinokuthi zinikezelwe yidolophu yethu entle.
Kukho izithuthi zikawonke-wonke kodwa ngokubanzi uya kufuna imoto.
Ndihlala kwidolophu ukusukela ngo-1971 ukuze ndikwazi ukukuxelela ngaphezu kokuba unomdla wokuva malunga nengingqi yethu kunye nembali.
4.98 · Izimvo eziyi-302
Sabelana ngendlela eqhelekileyo kunye nabamelwane abathathu kuphela.
(Bonke banobuhlobo ukuba kunokwenzeka ukuba ubabone.)
We love the Sierra's, especially the giant s…
Thina kwisiza sikhala nje intsimbi yethu yokungena emnyango ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Atascadero